ဒီနေ့ ဖြစ်တာ.. ဆိုင်ကယ်စီး အကျွမ်းလွန်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ( ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ ) – ရှအေလငျး
ဒီနေ့ ဖြစ်တာ.. ဆိုင်ကယ်စီး အကျွမ်းလွန်တဲ့ ဖြစ်ရပ် ( ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ )
ဒီနေ့ ဖြစ်တာ.. ဆိုင်ကယ်စီး အကျွမ်းလွန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကားနဲ့ ဆိုင်ကယ်တိုက်တာပါ။ တိုက်ချက်က ဘယ်လောက်အထိပြင်းလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် အံ့သြမှင်သက်စွာ သိနိုင်ပါတယ်။
ပထမတော့ ဆိုင်ကယ်က ဓာတ်တိုင်ပေါ်က ဓာကြိုးစတွေပေါ်မှာ ချိတ်နေတာကို မြင်တော့ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် ထင်မှားမိပါတယ်။တကယ်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။
အရှိန်ပြင်းလွန်းတဲ့တိုက်ချက်ကြောင့် ဆိုင်ကယ်ဟာ လေပေါ်မှာ မြောက်တက်သွားပြီး လေးမီတာမြင့်တဲ့ ဓာတ်တိုင်မှာ တွဲလောင်းချိတ်မိလျှက်သားဖြစ်သွားတာပါ။အမှန်တကယ်သေချာ ချိတ်အောင် ပြစ်တင်ရင် ချိတ်မိချင်မှ ချိတ်မိမှာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကားနဲ့ဝင်တိုက်မိတဲ့ဆိုင်ကယ်ဟာ လေပေါ်မြောက်တက်ပြီး လေမီတာအမြင့် ဓါတ်တိုင်မှာ တွဲလောင်းချိတ်သွားတာပါ။ တိုက်လိုက်တဲ့ကားလည်း တိမ်းမှောက်ပြီး ကိုယ်ထည်ပြားချပ်သွားတယ်။
ဆိုင်ကယ်နဲ့ကားပေါ်က လူငါးဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
SAW mystery of “Sky motorcycle”
Amazing motor accident inThailand. motorcycle fly and hunging on the power line after hitacar . Five persons injured.
ဒီနေ့ ဖွဈတာ.. ဆိုငျကယျစီး အကြှမျးလှနျတဲ့ ဖွဈရပျကားနဲ့ ဆိုငျကယျတိုကျတာပါ။ တိုကျခကျြက ဘယျလောကျအထိပွငျးလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့တငျ အံ့သွမှငျသကျစှာ သိနိုငျပါတယျ။
ပထမတော့ ဆိုငျကယျက ဓာတျတိုငျပျေါက ဓာကွိုးစတှပေျေါမှာ ခြိတျနတောကို မွငျတော့ဟုတျမှဟုတျရဲ့လားလို့တောငျ ထငျမှားမိပါတယျ။တကယျတော့ ထိုငျးနိုငျငံမှာ တကယျဖွဈသှားတဲ့ ဖွဈရပျပါ။
အရှိနျပွငျးလှနျးတဲ့တိုကျခကျြကွောငျ့ ဆိုငျကယျဟာ လပေျေါမှာ မွောကျတကျသှားပွီး လေးမီတာမွငျ့တဲ့ ဓာတျတိုငျမှာ တှဲလောငျးခြိတျမိလြှကျသားဖွဈသှားတာပါ။အမှနျတကယျသခြော ခြိတျအောငျ ပွဈတငျရငျ ခြိတျမိခငျြမှ ခြိတျမိမှာပါ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ ကားနဲ့ ဝငျတိုကျမိတဲ့ဆိုငျကယျဟာ လပေျေါမွောကျတကျပွီး လမေီတာအမွငျ့ ဓါတျတိုငျမှာ တှဲလောငျးခြိတျသှားတာပါ။ တိုကျလိုကျတဲ့ကားလညျး တိမျးမှောကျပွီး ကိုယျထညျပွားခပျြသှားတယျ။
ဆိုငျကယျနဲ့ ကားပျေါက လူငါးဦးဒဏျရာရသှားတယျလို့သိရပါတယျ။
ရေဘယ်လောက်ကြီးကြီး တစ်ခါမှမမြုပ်တဲ့ ​မော်​လမြိုင်​ ​ခေါင်း​ဆေးကျွန်း ….. :O
ကြုံဖူးသူတိုင်း… ဒေါသထွက်စေနိုင်တဲ့ …အဖြစ်အပျက်များ
အသက် ၃၀ ကျော်ကွာတဲ့ ချစ်သူနဲ့ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မယ် သမ္မတ ပူတင်
မျက်ရည်ကျလောက်တဲ့ အထိခံစားရမယ့် အလှမယ် တစ်ဦးနဲ့ လမ်းဘေးက သူတောင်းစားတစ်ဦး ရဲ့...
ဆယ်လီဖြစ်နေတဲ့ …ဒီဖားကြောင့် ..ဆရာကြီးမနေသာ… မိုး ဟောကိန်းထုတ်
သဘင်လောကသားများအတွက် …တိုက်ခန်းတွေ ဆောက်လုပ်ပေးနေတဲ့ မင်းသား ဖိုးချစ်